Dare repamusoro ranzwa chikumbiro chemutori wenhau, Hopewell Chin’ono, chekuti atongwe achibva kumba pamhosva yaari kupomerwa yekuburitsa mashoko emanyepo, rikati richapa mutongo waro munguva inotevera.
Vachisvitsa chikumbiro chaChin’ono kudare chekuti atongwe achibva kumba kwake, rimwe remagweta ake, VaHarrison Nkomo, vaudza dare kuti mutongi wedare ramejasitiriti, VaLanzini Ncube, vakakanganisa pavakanyima Chin’ono mukana wekubhadhara mari yechibatiso.
VaNkomo vati mutongo waVaNcube wekunyima Chin’ono mukana wekubhadhara mari yechibatiso wakange usina kufanira sezvo pasina humbowo hwakasvitswa kudare nevachuchisi venyaya iyi hunoratidza kuti pane fungidziro yekuti Chin’ono akapara mhosva yaari kupomerwa.
Vati chikamu chemutemo waari kunzi akatyora chakabviswa mumagwaro emitemo yenyika nedare repamusorosoro munyika reConstitutional Court.
VaNkomo vati zvinoshamisa kuti VaNcube vakaenderera mberi nekuramba kuti Chin’ono atongwe achibva kumba kwake kunyange hazvo pasina humbowo hwakasvitswa kudare nemapurisa pamwe nevachuchisi hunoratidza kuti ihoromori.
Asi muchuchisi panyaya iyi, VaRichard Chikosha, vati zviri pachena semhanza kuti Chin’ono akataura manyepo sezvo mwana waanonzi akati akafa mushure mekurohwa nemboma nemumwe mupurisa ari mupenyu uye asina kukuvara kana kurohwa.
Vachibvunzurudzwa nemutongi wedare, VaDavison Foroma, VaChikosha vatenda kuti Chin’ono haanganzi ihoromori kana asati ambobatwa nemhosva.
VaChikosha vati mutemo wakaraswa nedare unonzi Chin’ono akatyora wakavandudzwa neAmendment 3 yakaitwa muna 2016 saka nokudaro uchiri mumagwaro.
Asi VaNkomo vati zvataurwa naVaChikosha izvi zvakafanana nekumutsa chitunha.
VaForoma vati vachatura mutongo wavo muzuva ravasina kutara.
Rimwe remagweta aChin’ono, VaJeremiah Bamu, vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare.
VaBamu vatiwo vasvitsawo zvimwe zvikonzero kudare zvinoratidza kuti VaNcube vakakanganisa mumutongo wavo.
Nyaya yemwana uyu yakasungisawo mumiriri weZengeza West muparamende uye vari mutevedzeri wasachigaro muMDC Alliance, VaJob Sikhala, pamwe nemutauriri webato iri, Muzvare Mahere.
VaSikhala vakatarisirwa mudare repamusoro mangwana apo chikumbiro chavo chekuti vatongwe vachibva kumba chakatarisirwa kunzwikwa mushure mekuraswa kwechikumbiro ichi nedare ramejasitiriti iro rakabvuma kuti Muzvare Mahere vatongwe vachibva kumba kwavo.
Mune imwewo yanga iri mumatare, VaForoma vati Arnold Kamudyariwa uyo anozivikanwa mune zvemimhanzi nezita remadunhurirwa rekuti DJ Fantan nevamwe vake vaviri vabhadhare zviuru gumi zvemadhora ari maRTGS semari yechibatiso vakamirira kunzwikwa kwechikumbiro chavo chekupikisa mutongo wakaturwa nedare ramejasitiriti pamhosva yavakabatwa nayo.
DJ Fantan nevamwe vake vanoti Tafadzwa Kadzimwe uyo anozivikanwa achinzi Levels pamwe naSimbarashe Chanachimwe uyo anozvikanwawo mune zvemimhanzi achinzi Dammer, vakange vatongerwa kugara mujeri kwemwedzi mitanhatu mushure mekubatwa nemhosva yekunzi vakaridzira vanhu vanga vakamirira kupinda mugoredzva mimhanzi kuMbare vachityora mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19.
Zvichitevera mutongo wanhasi, vatatu ava vachange vari kudzimba dzavo vakamirira kuti mutongo wavakange vapihwa uongororwe nedare repamusoro.
Zvichakadai, VaForoma vanyima mukana wekubhadhara mari yechibatiso vamwe vakuru-vakuru mukanzuru yeHarare vanoti VaTendai Kwenda vanoona nezvemari mukanzuru iyi pamwe naVaCainos Chingombe vanoona nezvevashandi.
Vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekushandisa hofisi dzavo zvisiri izvo uye dare rati hapana zvavasvitsa kudare zvinonwisa mvura zvinokodzera kuti vapihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso.